‘मिडिया र जनताको आवाजले कारबाही रोकियो, सबै प्रति आभारी छु’:-डा. पुन - Vision Online News
‘मिडिया र जनताको आवाजले कारबाही रोकियो, सबै प्रति आभारी छु’:-डा. पुन
भिजन अनलाईन न्युज संवाददाता प्रकाशित: ८ बैशाख २०७७, सोमबार ०२:४४ 321 पटक हेरिएको
काठमाण्डौँ, बैशाख ८ ।
बिश्व कोरोना भाईरसको महामारीमा फसिरहेको सन्दर्भमा डाक्टर पुन र मन्त्रालय बीच देखिएको बिबाद समय सान्दर्भिक होईन । डाक्टर पुन र मन्त्रालय बीच देखिएको बिबादलाई जनस्तरबाट तिब्र दबाब बढेपछि हिजो मन्त्रालयले डा.पुनलाई सामान्य सोधपुछ मात्र गरिएको थियो । कारबाहीको तयारीमा रहेको मन्त्रालय सामाजिक संजाल र संचार माध्यमको तीब्र असन्तुष्टि र दबाबका कारण डाक्टर पुनलाई लेखिएको पत्र नै परिवर्तन गरी निजलाई सामान्य सोधपुछ मात्र गरिएको थियो । डाक्टर पुनले तत्काल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको पत्रकारहरुको प्रश्नमा सामान्य भनिरहे पनि पछि जनता र मिडियाको दबाबले मेरो कारबाही रोकिएको स्वीकार गरेका छन । उनै डाक्टर पुनसँग नयाँ पत्रिकाले गरेको अन्तवार्ता हामीले पनि तल साभार गरेका छौँ ।
तपाईंमाथि कारबाहीको के तयारी थियो, स्थगित कसरी भयो रु पत्र कसरी परिवर्तन भयो रु
ममाथि कारबाहीको तयारी भएको थियो भन्ने त मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसअघि मिडियामा दिएका प्रतिक्रियाबाट पनि प्रस्ट हुन्छ नि । डाक्टर भएर किन जान्ने हुने रु चेतना फैलाउँछु भन्दै किन बोल्ने रु आवश्यक परे मन्त्रालयका प्रवक्ता बोल्छन् भनेर त मिडियामा उहाँहरूले बोल्नुभएकै हो नि । छापिएकै छ नि । तर, यो महामारीका विषयमा विज्ञ डाक्टर नबोलेर को बोल्ने भन्ने मेरो अडान अहिले पनि छ । किनकि चेतना फैलायो भने संक्रमण रोकिन्छ, त्यसैले चेतना फैलाउनु त हाम्रो धर्म हो भन्ने मेरो भनाइ छ ।
महामारीका वेला निरन्तर बिरामी जाँचिरहेको डाक्टरलाई स्वागत गर्न त पत्र अवश्य काटिएको थिएन । तयारी त कारबाहीकै थियो । तर, आइतबार म मन्त्रालयमा पुग्दा स्थिति फेरिएको थियो । असाध्यै राम्रोसँग कुराकानी भयो । म मन्त्रालयमा पुग्दा धेरै कुरा मिलिसकेको रहेछ । यसलाई कारबाही गर्छु भन्दै हिँडेका हुन् । तर, अहिले हामी सबै मिलेर जानुपर्छ भनेपछि मैले हुँदैन भन्ने कुरै भएन । मिलेर कोभिडविरुद्ध लडौँ, आपसमा नलडौँ त मैले नै भन्दै आएको छु । त्यसैले उहाँहरूको प्रस्तावलाई मैले सहर्ष स्वीकार गरेँ । तर, अब मिलेर अघि बढ्ने हो, कोरोनाविरुद्ध संगठित अभियानमा पहिलेजस्तै सक्रिय हुने हो ।
सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र न्यायको पक्षमा बोल्ने नेपाली मिडियाप्रति म गर्व गर्छु ।
यो प्रसंगमा मूलधारका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइनले तपाईंको भनाइ छापेका छन्, तपाईंको पक्षमा बोलेका छन् । त्यो अन्तर्वार्ता छापिएपछि तपाईंको केही गुनासो छ ?
गुनासो होइन, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । धेरै मिडियाले मलाई साथ दिनुभयो । शेरबहादुर पुनलाई व्यक्तिगत रूपमा माया गरेर होइन, एउटा पेसाकर्मीलाई हतोत्साही गर्न पाइँदैन भनेर उहाँहरूले लेख्नुभएको हो । अझ नयाँ पत्रिकाले त मेरो पृष्ठभूमिसहित त्यति ठूलो स्थान दिएर आवाज उठाइदियो । सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र न्यायको पक्षमा बोल्ने नेपाली मिडियाप्रति म गर्व गर्छु । मिडियाकर्मीले सत्यतथ्य बाहिर ल्याइदिनुभयो, त्यसैले त मलाई कारबाही गर्ने तयारी स्थगित भयो । अस्पतालमा पुगेको पत्र किन परिवर्तन भयो भन्ने त सबैले बुझिहाल्नुहुन्छ होला । आज म मन्त्रालय उपस्थित हुन नपाउँदै मेरो आवाज मिडियाबाट मन्त्रालय पुगिसकेको थियो ।
समाचार कारण जनताको दबाब बढेको हो । यसले गर्दा नै उहाँहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको हुनुपर्छ । अन्यथा कति धम्की आउँथे, मलाई थाहा छ । तर, मिडिया र जनताका कारण आइतबार माहोल पूरै परिवर्तन भयो । यही प्रसंगमा पनि म भन्न चाहन्छु– तपाईंहरूजस्ता मिडियाकर्मीले अन्यायको विरुद्ध बोल्नुभएको छ, न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनुभएको छ । सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुभएको छ । यसमा कुनै दुईमत छैन । मलाई चिठी लेख्नेदेखि धम्की दिनेसम्मका काम भएका थिए, मिडियाकै कारण ती सबै ‘ब्याक’ भएका हुन् । यो सब प्रसंगमा एक दिन म आफैँले लेख्नेछु । तर, न्यायको पक्षमा उभिने मिडिया, देश तथा विदेशमा रहेर मप्रति माया, सद्भाव व्यक्त नेपालीप्रति आभारी छु ।